नेपाल पछि नहटे भारतले पुनः ना’का’बन्दी लगाउने संकेत ! – Nepal Insider
मुख्य पृष्ठ /समाचार/नेपाल पछि नहटे भारतले पुनः ना’का’बन्दी लगाउने संकेत !
नेपाल पछि नहटे भारतले पुनः ना’का’बन्दी लगाउने संकेत !
एजेन्सी। नेपाल भारत दूवै देशको आआफ्नो अ’डान रहेका कारण नेपाल र भारत बीच तातीरहेको सीमा वि’वादले नयाँ मोड लिन थालेको छ । नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको नयाँ नक्शा प्रति दिल्लीले फेरि आ’पत्ती जनाएको छ । नेपालले प्रतिनिधिसभाबाट सर्वसम्मतले पारित गरेको नक्शा प्रति भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवत्ता अनुराग श्रीवास्तवले भने– ‘भारतले सीमा विषमा पहिलै आफ्नो स्पटोक्ति दिइसकेको र भारतीय भूभाग समेटेर नेपालले जारी गरेको नयाँ नक्शा प्रति भारतले आ’पत्ति प्रकट गरिसकेको छ।’
‘ऐतिहासिक तथ्य वा प्रमाणका आधारमा नेपालले दा’बी नगरी कृत्रिम विस्तारबाट नेपालले नयाँ नक्शा बनाएकोमा यो मान्य हुदैँन’ –स्रिवास्तवले भने । नेपालले गरेको वार्ता अनुरोधलाई स्वीकार्दै कू’टिनीतिक माध्यमबाट मु’द्दालाई सुल्झाउन प्रयास हुने सक्ने आशा रहेको छ । तर, नयाँ नक्शाले कू’टिनी’तीक तहबाट हुने वार्तालाई समेत ध’क्का पुर्याएकोे छ।
नयाँ नक्शा पारित गरे पश्चात नेपाल र भारतको कूटनीतिक सम्बन्धमा सं’कट देखापरेको छ । नेपालले दा’बी गरेको भूभाग कृत्तिम रहेको छ र उक्त निर्णयले सीमा मु’द्दाहरुमा हुने वार्ताको दूईपक्षिय साझेदारीलाई उल्लंघन गर्न खोजेको भारतले आ’रोप लगाउन थालेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उत्पन्न पछिल्लो अवस्थाबारे उल्लेख गर्दै अब दिल्ली क’डा रुपमा प्रस्तुत हुने विषय भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन् । नेपालले नयाँ नक्शा जारी गरेपश्चात दूवै देशबीचको सचिवस्तरमा वार्ता गर्न नेपालले भारतलाई बारम्बार अनुरोध गरिरहेतापनि भारतीय पक्षबाट कुनै प्रतिक्रिया आएको छैन।
प्रधानमन्त्रीस्तरबाट भने अप्रिल १० तारिखको टेलिफोन संवादमा महामारीलाई र तत्काल उत्पन्न भएको सीमा वि’वादलाई लिएर संवाद भएको थियो । नेपालले चालेको कदमले सम्बन्धमा ध’क्का पुगेको भनिएको छ । भारतले सीमा वि’वादीत क्षेत्रमा व्यापक हस्तक्षेप र जबरजस्ती गर्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । नेपाल पछि नहटे सन् २०१५ मा भारतद्वारा गरिएको नाकाबन्दी पुनः निम्तिन सक्ने जनाइएकोे छ । भारतले प्रभावकारी र आ’क्रमक कदम चाल्न सक्ने भारतीय सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्।
सहसेनानीको पिटाइबाट सिपाही सख्त घाइते